Vaovao - Ny tampon'ilay ravina nohosorany dia misy fanoherana mahery vaika
Ny tampon'ilay ravina vita amin'ny vy dia manana fanoherana mahery vaika
Ny takelaka galvanis dia iray amin'ireo vokatra lehibe an'ny orinasanay, ny orinasanay dia afaka mamokatra entana avo lenta miaraka amin'ny fizotran'ny famokarana teknika tena tsara, ary namolavola ny fifandraisan'ny mpanjifa maro izahay. Manaraka izany dia hanome ny fanolorana amin'ny antsipiriany ny endrik'ireo famaritana takelaka galvanisialy isika.
Ny velaran'ny vy mandrisika dia mahazo fanoherana mahery vaika, fanatanterahana dingana tsara, ary mahomby amin'ny famokarana sy fanodinana. Na izany aza, ny fananana sary amin'ny firaka vy dia tsy tsara toa ny vy vita amin'ny vy mangatsiaka, ary ny sosona zinc dia tena mora rava mandritra ny welding elektrika. Ny ravina vy mafana sy mangatsiaka vita amin'ny vy amin'ny fiainana andavanandro dia mety amin'ny indostrian'ny famokarana toy ny milina sy ny fitaovan'ny fiompiana, ny fitehirizam-bary ary ny rafitra birao mpiaro mitafo, ny endrika mampiavaka azy dia ny vidiny ambany ary koa ny sanda avo kokoa nampiana. Satria ny fanodinana takelaka vy mihodina tsy mangatsiaka, noho izany dia tsy ho hitantsika ny teboka mainty sy ny oksida vy izay matetika miseho amin'ny fatorana mafana, miteraka fahombiazan'ny fizotrany, malefaka avo ary famaritana entana mangatsiaka mangatsiaka avo marina, galvanizing mangatsiaka dia galvanizing elektrika amin'ny 10-50g / m2 ihany, ny fanoherana ny harafesin'ny plastika zinc dia tsy mitovy amin'ny an'ny galvanizing mafana. Ny vidin'ny galvanizing elektrika amin'ny fanamafisana trano dia somary ambany ihany koa. Ny fantson-drano mafana dia manaparitaka ny vatan'ny vatan'ny vy ao anaty toe-piainana mafana, matanjaka be ny firaiketany, ary tsy mora ny milatsaka. Na dia miseho koa aza ny fantsom-panafody mafana manaparitaka ny harafesina, dia afaka mameno ny fepetra ara-teknika sy ara-pahadiovana amin'ny fotoana lava kokoa izy io.
Ny toetra sy ny mason-tsivana dia mila mandray fepetra takiana amin'ny fampiharana tsy manam-paharoa, toy ny toetra mampiditra elektromagnetika, toetra mampiavaka ny lovia kely. Ny vy vita amin'ny vy dia matetika ampiasaina amin'ny fomba ara-toekarena sy ara-dalàna amin'ny fitsaboana anti-harafesina. Manodidina ny antsasaky ny famokarana zinc eto an-tany no ampiasaina amin'ity dingana ity.